Soomaaliya iyo Sudan oo ka wada-hadlay xiriirka labada dal | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Soomaaliya iyo Sudan oo ka wada-hadlay xiriirka labada dal
Soomaaliya iyo Sudan oo ka wada-hadlay xiriirka labada dal
Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan Mudane Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa kulan la yeeshey wasiiru dowladda wasaaradda Arrimaha dibadda Dalkaasi,ahna sii haayaha xilka wasaaradda.
Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa sheegay in uu kala hadlay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalkaasi Suudaan Dr Cumar Nasrudiin sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal Soomaaliya iyo Suudaan.
“Waxaan saakay xafiiskiisa wasaaradda arrimaha dibadda kula kulmay wasiiru dowlaha wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalkan Suudaan,ahna siihayaha xilka wasiirka,waxaana aan kala hadlay sidii loo dar dar gelin lahaa adkeynta xiriirka labada dal ka dhexeeya”. Ayuu yiri Danjire maxamed Sheekh Isxaaq.
Wuxuu sidoo kale ugu hambalyeeyey dowladda Suudaan dowrkeedi ku aadan dadaalada nabadeeda ee jabhadaha ku dagaalamayay Koonfurta Suudaan,iyadoo dowladaha IGAD oo Soomaaliya ay ku jirto ay ka qeybgali doonaan munaasbadda saxiixa heshiiskaas.
Dhanka kale safiirka Soomaaliya ee Suudaan ayaa ka hadlay arrimo la xiriiray qarashaad dowladda Suudaan ay ku soo rogtay dhanka sharciga joogitaanka dalkaasi,taasi oo Soomaalida saameyn ku yeelatay goor hore,wuxuuna xusay in lagu guuleystay xalinta arrintaasi.
Maqaal horeMareykanka oo shaaciyey lacagta Soomaaliya kaga baxda in aysan yeelan natiijo
Maqaal XigaDF oo qeyb kale ku kordhineyso dhismaha Garoonka Beledweyne